WRSP မူလစာမျက်နှာ - WRSP
Fabiola လိုပက်ဇ် Chesnut, မူလက Morelia, မက္ကစီကိုမှအ Richmond အတွက်အထက်တန်းကျောင်းစပိန်သွန်သင်နှင့်လည်းဘာသာရေးကိုအထူးပြုနေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပါတယ် ...
တိမောသေ Beal Case Western Reserve တက္ကသိုလ်မှာဘာသာတရား၏ Florence Harkness ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူက Editor ကို-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆိုပါသည် ...
ကရင် O 'Brien-Kop
ကရင် O 'Brien-Kop လက်ရှိလန်ဒန် SOAS University မှာဘာသာတရားနှင့်ဒဿနဌာနအတွင်းအကြီးတန်းသွန်သင်ခြင်းတူတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ...
Kerstin Shands သူမလည်းအများအပြားဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဘယ်မှာ 1998, ကတည်းကSödertörnတက္ကသိုလ်မှအင်္ဂလိပ်ဦးစီးဌာန၌ဆုံးမဩဝါဒပြီးပါပြီ ...
Lyn Millner သေ၏သှေးဆောငျ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးအမေရိကန်သတ်ဖို့, တစ်ဦးဖလော်ရီဒါရွှံ့ညွန်ထဲကနှင့်ဖောက်ပြန်သောသူငယ်တမန်တော်မြတ် ...
Agnieszka Halemba (ကိန်းဘရစ်ပါရဂူဘွဲ့ 2002 တက္ကသိုလ်; ဝါဆော၏ Habilitation 2016 တက္ကသိုလ်) ကိုအင်စတီကျုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူမှုရေးမနုဿဗေဒပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါဝိဒ်သည် G. အ Bromley
ဒါဝိဒ်သည် G. အ Bromley ဗာဂျီးနီးယားဓနသဟာယတက္ကသိုလ်တွင်ကမ္တာလေ့လာရေးကျောင်းအတွက်ဘာသာရေးလေ့လာရေးနှင့်လူမှုဗေဒပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ ...
Raffaella Di Marzio လွတ်လပ်သောပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည် Pontifical Salesian မှာဘာသာတရား၏စိတ်ပညာအတွက် ...
ဒံယလေသ Wojcik အော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှဘာသာရေးလေ့လာရေးအတွက်အင်္ဂလိပ်နှင့် Folklore လေ့လာရေးပါမောက္ခများနှင့် Affiliate ဒြေဖြစ်ပါတယ်။ ...
မာရိကအန်း Foley, CND မှာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတရေးလေ့လာရေးဓမ္မနှင့်ဒါရိုက်တာ၏တွဲဘက်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ် ...
ဂျက်စီကာ McCauley တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဘာသာတရားများအတွက်သုတေသနလက်ထောက်များနှင့်ဝိညာဉ်ရေးစီမံကိန်း, 2012-2013 အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပူးတွဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ...
Isabelle Kinnard Richman
Isabelle Kinnard Richman အလယ်ခေတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသမိုင်းအတွက်ချီကာဂို Divinity School တွင်တက္ကသိုလ်ကနေဘုရားကျောင်းသမိုင်းအတွက်သူမ၏ပါရဂူဘွဲ့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ...
ရေဗက္ကာ Moore က
ရေဗက္ကာ Moore က San Diego မှ State University မှဘာသာရေးလေ့လာရေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တစ် Ph.D ဘွဲ့ကိုရှိပါတယ် ဘာသာရေးလေ့လာမှုများအတွက် ...
ဂျေ Eugene ရွှံ့စေး
ဂျေ Eugene ရွှံ့စေးကိုမိမိ BA, MA နှင့်ပါရဂူဘွဲ့ဒီဂရီရရှိခဲ့ပြီးရှိရာချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှာရုရှားသမိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ...
Angela Rudert Ithaca ကောလိပ်မှာဒဿနိကဗေဒနှင့်ဘာသာတရားများ၏ဦးစီးဌာနအတွက်ကထိကဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဘာသာတရားအတွက် BA ဘွဲ့ရရှိခဲ့ ...
Suzanne Newcombe သူမတစ်ဦးအနေဖြင့်ခေတ်သစ်ယောဂသုတေသီရှိရာပွင့်လင်းတက္ကသိုလ် (ဗြိတိန်) မှာဘာသာရေးလေ့လာရေးအတွက်ကထိကဖြစ်ပါတယ် ...
Myriam က de Palma
Myriam က de Palma ကွိဘက်စီးတီး, ကွိဘက်တှငျနထေိုငျနှင့်အလုပ်လုပ်လွတ်လပ်သောပညာရှင်များနှင့်မှူးဖြစ်ပါတယ်။ 2004 မှာတော့သူမရရှိခဲ့သည် ...
Maija Penttilä (neé Turunen) ဟယ်လ်စင်ကီတက္ကသိုလ်မှဘုရားကျောင်းနှင့်လူမှုလေ့လာရေးအတွက်တွဲဖက်ပါမောက္ခ (Docent) ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ...
အယ်လ်ဘာတိုဇျ Pulido သူယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုအများကြီးသင်ယူဘယ်မှာ San Diego မှ-တီယူအာနာ၏ la Frontera တလျှောက်တွင်ကြီးပြင်း ...
Alexis Liverman တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဘာသာတရားများအတွက်သုတေသနလက်ထောက်များနှင့်ဝိညာဉ်ရေးစီမံကိန်း, 2012-2013 အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
WRSP Entries နှင့် Authors
အဆိုပါ entry အညွှန်း အဆိုပါအကြောင်းအရာအလိုက်, ဒေသဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအထူးစီမံကိန်းများအပါအဝင် WRSP entries တွေကိုတစ်ခုအက္ခရာစဉ်ဖွဲ့စည်းစာရင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအတွက် posts များအဘို့သီးခြားညွှန်းကိန်းရှိပါတယ် တိုးပွားအရင်းအမြစ်များ WRSP ပုဒ်မ။
မကြာမီက & အနာဂတ် Entries
WRSP အဆက်မပြတ်ဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့များခေါင်းဆောင်များ, နေရာတွေ, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သစ်ကို entries တွေကိုဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ မကြာမီကနှင့်အနာဂတ် Entries WRSP အပေါ်စာစောင်ရက်စွဲများအတူဤနေရာတွင်စာရင်းပါလိမ့်မည်။
အဖွဲ့အစည်းက & ခေါင်းဆောင်မှု
WRSP အနေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးတွင်လုပ်ငန်းစုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ WRSP အဆိုပါ WRSP အထူးစီမံကိန်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် WRSP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသူကိုပုံမှန်ဘာသာတရားပညာရှင်များပါဝင်ပါသည်တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီကဦးဆောင်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်လွှားဘုရားဖူးနေရာများ & အလေ့အကျင့်
(Project မှဒါရိုက်တာ: ရှိမုနျကို Coleman, ယောဟန် Eade, မှ Ian Reader ကို)
(Project မှဒါရိုက်တာ: တိမောသေ Miller က)
ဘာသာအသစ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Visual Arts
(Project မှဒါရိုက်တာ: Massimo Introvigne)
(Project မှဒါရိုက်တာ: ရေဗက္ကာ Moore က, ကက်သရင်း Wessinger)
MARIAN APPARITIONAL ဆည်းကပ်အုပ်စုများ
(Project မှဒါရိုက်တာ: ယောသပ်သည် Laycock နှင့်ကို Jill Krebs)
(Project မှဒါရိုက်တာ: ကာရိုး Cusack, Bernard ဒိုဟာဆီ)
(စီမံကိန်းဒါရိုက်တာဒေါက်တာ Kaarina Aitamurto ဒေါက်တာ Maija Penttilä)
(Project မှဒါရိုက်တာ: ဆူ Palmer ကဂျွန် Peterson)
(Project မှဒါရိုက်တာ: မှ Ian Reader ကို, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)
ITALY ဝိညာဉ် & ဘာသာရေးအစဉ်အလာ
(စီမံကိန်းဒါရိုက်တာဒေါက်တာ Stefania Palmisano ဒေါက်တာ Massimo Introvigne)
ဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာစကားရပ်၏ပုံစံများနှင့်အစဉ်အလာကိုမကြာခဏ, ပထဝီ, နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ တိကျတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအစဉ်အလာအတွက်အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပညာရှင်များဟာစုစည်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပြီ ဒေသတွင်းစီမံကိန်းများ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပို. ပို. ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားဘာသာရေးအရနှင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ပညာရှင်တစ်ဦးကအရေအတွက်အားဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးစည်းရုံးပြီးတိကျတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတှငျနထေိုငျပုံ chronicling အသိုင်းအဝိုင်းသုတေသနစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အား links ဒေသခံစီမံကိန်းများ ဤနေရာတွင်တင်ပြနေကြပါတယ်။
WRSP တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ် အင်တာဗျူးဖိုရမ် ဘယ်မှာအခြားမီဒီယာဆိုင်များတွင်ထုတ်ဝေသော WRSP နှင့်အင်တာဗျူးခြင်းဖြင့်ကောက်ယူနှစ်ဦးစလုံးအင်တာဗျူးတွေကိုစုဝေးစေကြသည်။ ပညာရှင်များနှင့်အခြားတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအင်တာဗျူးများ WRSP အပေါ်အုပ်စု profile များကိုတိုးပွားကြောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။
WRSP profile များကိုဖုံးလွှမ်းအဆိုပါအုပ်စုများတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကျယ်ပြန့်မီဒီယာလွှမ်းခြုံရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမီဒီယာစင်တာမှ ဘာသာတရားပညာရှင်များမှအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမီဒီယာဆိုဒ်များတစ်အရေအတွက် identifier နှင့်လင့်များ။
စာအုပ်များ, ဆောင်းပါးများ, စက္ကူ, & အစီရင်ခံစာများ
WRSP နှင့်အတူဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ profile များကို supplements ဆောင်းပါးများ & စာတမ်းများ ပညာရှင်များထောက်ပံ့ပေး။ သူတို့ဟာ WRSP profile များကိုတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များတိုးပွားကြောင်းအရင်းအမြစ်များကိုဆက်ကပ်။ ဤအပစ္စည်းများကိုပွားသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုချက်စာရေးသူနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။
ဗီဒီယိုကို Connections ကို
WRSP တည်နေရာနှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုပစ္စည်းများမှလင့်များကြောင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်စာသား entries တွေကိုမြှင့်တင်ရန်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို Connections ကို entries တွေကိုအက္ခရာစဉ်စာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာစာသားကို entries တွေကိုချိတ်ဆက်နေကြသည်။
ခေတ်ပြိုင်နှင့်သမိုင်းဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့များကိုလေ့လာနေပညာရှင်များမှအကျိုးစီးပွားပစ္စည်းထိန်းသိမ်းထားပြီမြောက်မြားစွာမော်ကွန်းတိုက်ရှိပါတယ်။ ဤအမော်ကွန်းတိုက်၏အတော်များများကအသေးစားနှင့်အတော်လေးကိုမသိရှိပါ။ WRSP သည်ဤပြုစုနေသည် မော်ကွန်းတိုက်စင်တာများ ပညာရှင်များများအတွက်သုတေသနအရင်းအမြစ်အဖြစ်။
အဆိုပါ ပညာရှင်များထောင့် ပညာရှင်များသမိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေး, အယူဝါဒ, အဖှဲ့အစညျး, လှုပ်ရှားမှုများနှင့် WRSP အပေါ် profiled အဆိုပါအုပ်စုများအငြင်းပွားစရာများ (အဖြစ်ဆက်စပ်အုပ်စုများ) ရက်နေ့တွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အမြင်များအားမျှဝေနိုင်မည့်ပုဂ္ဂလိကဒိုမိန်းပေးထားပါတယ်။ ယင်းမှ Access ကို ပညာရှင်များထောင့် ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ပင်မစာမျက်နှာ | ကြှနျုပျတို့အကွောငျး | မိတ်ဖက် | profiles | အရင်းအမြစ်များ | လှူဒါန်းရန် | ဆက်သွယ်ရန်
မူပိုင်ခွင့်© 2016 ကမ္ဘာ့ဖလားဘာသာတရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးစီမံကိန်း
လုကာအလက်ဇန်းဒါးအားဖြင့် Web Design